बेरोजगारीहरुले सडकमा जात्रा देखाएका छन् । एमसिसी भनेको केहो थाहा छैन :दिपकराज गिरी? – Cn Chautari
बेरोजगारीहरुले सडकमा जात्रा देखाएका छन् । एमसिसी भनेको केहो थाहा छैन :दिपकराज गिरी?
फागुण २, २०७८ सोमबार 759
नेपालमा सडक बाट ।
केहीँ कुरा हुन्न सबै सदन बाट नै हुन्छ भनेर नेताहरुलाई #MCC पास गराउनको निम्ति घुमाउरो पारामा आत्मसात गर्ने यी नेपालका कलाकार Deepak Raj Giree देख्दा दया लाग्यो! लाखौं जनता #MCC को विरुद्धमा सडकमा छन्,।
के उनीहरु बेरोजगारी भएर नै समय बिताउन सडकमा गएका हुन् कि आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनको खातिर संघर्षमा हुन् नी महानायक गिरि ज्यु?🙄 #MCC को सम्झौतामा उल्लेखित आपत्तिजनक बुँदाहरुको अध्ययन नै नगरी राष्ट्रको गहना समेत मानिएका कलाकारले ।
संजालमा राष्ट्रघाती#MCC को घुमाउरो पारामा समर्थन गरेको कत्ती पनि सुहाएन! 🙄 #AP1HD बाट #MCC को समर्थनमा विज्ञापन बजाईएको थियो त्यो जनताले चर्को विरोध गरेसी माफ माग्दै हटाएका थिए गिरी जस्ता कलाकार र दोभाषे नेताहरुलाई बहिष्कार गरौं ।
हेक्का रहोस् गीरी ज्यु सशस्त्र युद्व सदन बाट थिएन र विश्राम पनि सदनबाट थिएन ! थियो त सडक नै! अहिलेका नेतालाई विश्वास गर्ने गिरीको दिमागलाई के भनौं खै! #बोलौं_बोलौं!!!
(जय देश,जय स्वाभिमान )❤️सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दीपक लेख्छन्, ‘।
चीन पनि ठीक, अमेरिका पनि ठीक, भारत पनि ठीक, सबै छिमेकी बराबर भन्ने जस्तो लिङ्ग नखुलेको परराष्ट्र नीतिको दिन गयो अब आफ्नो देशलाई दीर्घकालीन फाइदा जता हुन्छ, त्यहाँ स्पष्ट भएर उभिनुपर्‍यो ।
इतिहास हेर, हिसाब गर, स्पष्ट भइसक्यो । चीन र अमेरिका दुवैले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको स्पष्ट भइसक्यो । अब सिद्धान्त ले के भन्छ भनेर हेर्ने होइन, सडकका कुरा सुन्ने पनि होइन । डाटा हेरेर विगतले के भन्छ ? मुलुकको भविष्य हेरेर निर्णय गर्ने हो ।’
दीपकले हामी भोकै बस्छौं, कसैको सहयोग चाहिन्नँ भन्नुको अर्थ बेअर्थको भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘एमसीसीको विषयमा लिङ्ग खुल्ने स्पष्ट नीति अहंकार गरेर यथाशीघ्र निर्णय गर्नुमा नै राष्ट्रको भलाइ हुनेछ । मेरो निर्णय मैले भोट हालेको सांसदले गर्नेछन् ।
दीपकले एमसीसीको निर्णय सदनबाट नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सडकले निर्णय गर्ने भए अरबौं खर्च गरेर देशको ढुकुटी सकेर सांसदहरु छनोट गर्नुको के मतलब रु’ उनले लेखेका छन् । दीपकले देश डुब्दा जनताका प्रतिनिधि उत्रिने पक्कै छैनन्
Prevआज “भ्यालेन्टाइन डे”माया गर्ने मान्छेको खोजीमा छु । सम्पर्क गर्नुहोस
Nextमलाई सन्तुष्टी दिन सक्नेले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला रातभरि मज्जा दिनेछु ?
MCC पास नगरेको भन्दै अमेरिकाले १५ दिन भित्र सम्पुर्ण नेपालीहरु लाई देश छोडन आदेश
समीक्षासँगको विवादमा पलले दुखि हुँदै भने : ‘आखिर किन गरेको छु भन्ने लागेको छ’